Wakiilka ciyaaryahan Matteo Guendouzi oo Todobaadka soo socda la fariisanaya Kooxda Arsenal… (Maxaa laga wada hadlayaa?) – Gool FM
(London) 11 Luulyo 2020. Wakiilka ciyaaryahan Matteo Guendouzi ee Philippe Nabe ayaa la soo warinayaa inuu kulmi doono saraakiisha kooxda Arsenal isbuuca soo socda si ay uga wadahadalaan mustaqabalka ciyaaryahankan khadka dhexe.
Tan iyo qaab ciyaareedkiisii anshax xumida ahaa ee uu kala hortagay kooxda Brighton & Hove Albion bishii hore, Guendouzi ayaan hal kulan u ciyaarin kooxda koowaad ee Gunners.
Kaddib kulan uu la qaatay Mikel Arteta, ciyaaryahanka reer France ayaa la sheegay inuu diiday inuu raali-galin ka bixiyo dhaqankiisa, taasoo keentay in laga saaro tababarka kooxda koowaad ee waa weyn.
Wakhti la la xiriirinayo 21-sano jirkaan inuu meel kale u dhaqaaqayo, Shabakadda ESPN ayaa sheegeysa in wakiilkiisa Nabe inuu wadahadallo la yeelan doono Arteta iyo Madaxa kooxda kubadda cagta Arsenal ee Raul Sanllehi.
Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in Guendouzi uu door-bidi lahaa inuu ku sii nagaado kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London, inkastoo uu booskiisa haatan lumiyey.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Lorient ayaa weli gacanta ku haysta heshiis saddex sanadood ah oo kaga harsan qandaraaskiisa garoonka Emirates.
Maxkamadda CAS oo Man City ku wargelisay goorta ay ku dhawaaqayso go'aanka racfaankii looga mamnuucay Champions League